वीरेन्द्रनगरमा कर्फ्यु जारी, बाहिर निस्कन बन्देज
प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७६, मंगलवार १७:४२
कर्णाली प्रदेशको राजधानी बिरेन्द्रनगरमा कर्फ्यु जारी गरीएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले मंगलबार बेलुका ६ः३० बजेदेखी भोली बिहान ६ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु लगाउने निर्णय गरेको हो । सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार पुर्वमा ईत्राम खोला, पश्चिममा वाङ्गेसिमल, उत्तरमा कपासे ब्यारेक र दक्षिणमा रत्नराजमार्गको ५०० मिटर दक्षिण क्षेत्रसम्म कर्फ्यु जारी गरीएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले कर्फ्यु अवधिभर कसैलाई बाहिर हिडडुल नगर्न आग्रह गरेको छ । कर्फ्यु तोड्न खोज्नेलाई गोली समेत प्रहार गर्न सक्ने बताउँदै प्रशासनले सबैलाई घर जान आग्रह समेत गरेको छ ।
मंगलबार बिहान टिपरको ठक्करबाट एक युवकको ज्यान गएपछि वीरेन्द्रनगर बिहानदेखी तनावग्रस्त छ । घटनापछि आक्रोशित स्थानियहरुले सुरु गरेको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि स्थानिय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक दर्जन भन्दा बढी रबरको गोली चलाएको थियो भने दर्जनौं राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । दोहोरो झडपमा दर्जन बढी प्रर्दशनकारीहरु घाइते भएका छन् ।
मंगलबार बिहान ट्रिप्परको ठक्करबाट बिरेन्द्रनगरमा एक जनाको ज्यान गएपछि माहोल तनावग्रस्त बनेको हो । वीरेन्द्रनगर ४ मुलपानी चोक नजिक मंगलबार बिहान भे १ ख २२४२ नम्बरको ट्रिप्परले टक्कर कालिकोट महावै गाउँपालिका ३ घर भैइ हाल वीरेन्द्रनगर बस्दै आएका केशर सिंहको मृत्यु भएको थियो ।
युवा संघद्धारा ३८ परिवारलाई राहत वितरण
बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरानाका कारण बिश्व नै आक्रान्त बनिरहेको समयमा बाँकेका यूवाहरुले जानकीगाउँपालिका वडा नं. ३ का बिपन्न समुदायलाई राहत सामग्री...
रगतको अभाव हुन नदिन युवा संजाल सक्रिय
इमर्जेन्सी बिरामीहरुलाई रगतको अभाव हुन नदिनका लागि बाँकेका राजनीतिक युवाहरु सक्रिय भएका छन । बाँकेमा केही समय पहिला गठन भएको अन्तर पार्टी युवा संजालले...
देशमा अहिले पश्चिमी वायुको प्रभाव कायम छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशको पश्चिमी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा पुर्वी पहाडी भू–भागमा...
बिपन्न बर्गको लागि उठाइएको रकम गाउँपालिका मार्फत हस्तान्तरण
दैनिक मजदुरी र ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने गरिव तथा बिपन्न वर्गको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ जम्मा भएको रकम आज बाँकेका विभिन्न गाउँपालिका मार्फत हस्तान्तरण...
लायन्स क्लवद्वारा भेरी अस्पताललाई पिपिई प्रदान
लायन्स क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२५ B २ नेपालद्वारा कोरोना भाइरस चेकजाँचमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री पिपिई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ...
नेपालगन्जबाट थप दुईको स्याम्पल काठमाडौ पठाइयो
कोरोना भाइरसको आशंकामा नेपालगन्जबाट मंगलबार थप दुई जनाको 'थ्रोट स्वाब' परिक्षण गर्नका लागि स्याम्पल काठमाडौ पठाइएको छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण...
गरिव तथा बिपन्नलाई च्याउ बितरण
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का गरिव तथा बिपन्न वर्गका परिवारलाई चैते दशैको अवसरमा च्याउ बितरण गरिएको छ । गाभर मसरुम एग्रो फार्म बैजनाथ १, बाँकेले...
एम्बुलेन्स र मोटरसाईकल ठोक्किदा अनमीको मृत्यु
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ न्यूरोडमा मंगलबार बिहान एम्बुलेन्स र मोटरसाईकल एक आपसमा ठोक्कीदा एकको मृत्यु भएको छ । कोहलपुर मेडिकल कलेजबाट बिरामी...